असाहायको सहारा निलसागर आश्रम , उचित ब्यबस्था नहुँदा आश्रम चलाउन सास्ती - Thahaonline.com | थाहा अनलाइन Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
३० असार २०७७, मंगलवार ०६:४२
असाहायको सहारा निलसागर आश्रम , उचित ब्यबस्था नहुँदा आश्रम चलाउन सास्ती
थाहा अनलाइन १३ असार २०७७, शनिबार १९:४९ मा प्रकाशित
टेकबहादुर पुन,दाङ्ग / १३ असार
दिनभरी डुल्दै मागेर खानुपर्थ्यो । कतिको गाली सहनु पर्थ्यो त कतिले छिछि दुर दुर गर्थे । अरुको सामु हात नफिजाउँ पनि कसरी! पेटले खाना जो मागेको छ । मानिस जिवित रहनका लागि आखिर गास, बाँस र कपास त अति आबस्यक नै हो । दिनभरी बजारका गल्ली गल्ली भौतारिने ती मानसिक सन्तुलन गुमाएका अशक्त, असाहय ब्यक्तिका दैनिकी कहाली लाग्दो नै हुन्थ्यो ।
उनी त्यसै रोडमा आएका त हैनन् । कोहीकोही आफन्त नभएर बाध्यता बस रोडमा आएका हुन भने कसैलाई आफैले जन्म दिएका सन्तानले बेवास्ता गर्दा रोडमा आएका हुन् । सन्तानको लागि हरेक सपना सजाउने तिनै बाबा आमा मानसिक सन्तुलन गुमाएर या अशक्त, अपाङ्गता तथा बृद्द भएर रोडमा आएका उदाहरण थुप्रै छन् । जब उमेर ढल्केर शरिरले काम गर्न छोड्छ तब कति बुवा आमा तिरस्कारको घेराबन्दीमा पर्छन् ।
दिनभरी भौतारिने तिनै असाहय, अशक्त तथा बृद्द आमाबुवाको सहारा बनेको छ निलसागर आश्रम । देशका विभिन्न जिल्लामा असाहय आमाबुवाको सेवा गर्ने उद्देस्यले सञ्चालित निलसागरले बाँके, बर्दिया, दाङ्ग र पाल्पामा आश्रम सञ्चालन गरि सेवा सुरु गरिसकेको छ । सरकारको साथ सहयोग पाएदेखी देशका अन्य विभिन्न जिल्लाहरुमा पनि सेवा सुचारु गर्ने निलसागरले जनाएको छ । दाङ्गको देउखुरीमा गत पौषदेखी निलसागरले सेवा दिन थालेपछी दाङ्गका बजार हरुमा अहिले बेसाहारा असाहाय हरु देखिन छाडेका छन । निलसागरले देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका ८ सिसहनियामा आश्रम सञ्चालनमा लिएपछी दाङ्गका प्रमुख बजारहरुमा मानसिक सन्तुलन गुमाएर भौतारिने गरेका असाहाय हरु देखिन छाडेका हुन् । आश्रममा अहिले महिला पुरुष गरि ३० जना मानसिक रोगी भएका असाहाय, अशक्त बृद्दबृद्दा रहेका छन् । जसमध्य ७ महिला र २३ पुरुष छन । प्राय बिद्दबृद्दा छन । तिनै आश्रम अहिले लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।
‘लकडाउन’ले सहयोगी, मनकारी दाता, जन्मदिन जस्ता उत्सवहरु ठप्प भएपछि हिँजोआज सांझ बिहान छाक टार्न गाह्रो भएको छ । सामान्य प्रस्थितिमा जन्मउत्सब, बिवाह बर्षगाँठ, श्राद्द जस्ता अबसरमा सहयोगी दाता हरुबाट सहयोग स्वरुप रासन पानी आउँथ्यो । अहिले लकडाउनका कारण सहयोगमा कमी भएको छ जसले गर्दा कसरी खाना खुवाउने भन्ने पिरलो परेको छ निलसागर दाङ्गका सँयोजक प्रकाश बिष्टले भने । लकडाउन भए पश्चात राप्ती गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको खाद्यान्न पनि सकिन लागेको उनले बताए ।
सरकारी निकायबाट उचित ब्यबस्था नहुँदा र लकडाउनका कारण पनि मानबिय सेवामा समर्पित यस्ता आश्रमहरु दैनिक प्रभाबित हुँदैछन् । देउखुरी स्थित निलसागर आश्रममा बस्नका लागि पनि कोठाहरु पर्याप्त छैनन् । महिला पुरुष लाई छुट्टा छुट्टै बसाल्नुपर्ने भएकाले पनि पर्याप्त नभएको हो । उक्त भवनपनि अर्को ब्यबस्था नहुञ्जेल सम्म स्वर्गीय गिरा बहादुर कार्की र छोरा ईन्द्र बहादुर कार्किले आफ्नै घर आश्रमका लागि दिएका हुन् । अहिले सोही भवनको वरिपरि राप्ती गाउँपालिकाले टिनको बार समेत लगाएको छ । ‘मानसिक बिरामी भएकाले कोही बेला जोपनि भाग्न सक्नुहुन्छ, बार अति आबस्यक थियो सँयोजक बिष्टले भने-गाउँपालिकामा आग्रह गरियो, अनि बार भने लागेको छ ।’
भवनका लागि आफुले गाउँपालिका र माथिल्लो सरकारमा आबस्यक पहल गर्ने राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुबेदीले बताए । निलसागर आश्रमलाई स्थापना कालदेखी नै आबस्यक सहयोग गरिरहेको बताउँदै अध्यक्ष सुबेदीले आगामी दिनहरुमा सहयोगका लागि सधै तत्पर रहेको जनाए । ‘आश्रमलाई गाउँपालिकाको सहयोग मिलेको छ, हाम्रो दायित्व पनि हो, रासन पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबैमा सक्दो गरिएको छ अध्यक्ष सुबेदीले भने-भवनका लागीपनि मैले पहल थाल्नेछु, झट्टै हुने कुरा भएन, केही समय लाग्ला ।’
निलसागर दाङ्गका सँयोजक प्रकाश बिष्ट आफैपनि स्वास्थ्यकर्मी भएकाले सरकारी निकायलाई स्वास्थ्य चेकअपका लागि डाक्टर झिकाउनुपर्ने बाध्यता भने छैन । बिष्टले उनिहरुको ज्वरो, रुघाखोकी, झाडापखाला, प्रेसर लगायत अन्य सामान्य चेकजाँच आफै गर्छन् । मानसिक रोगका लागि भने कोहलपुर मेडिकल कलेजमा कार्यरत डा. मोहन बेलबासे द्वारा मासिक १ पटक चेकजाँच हुन्छ । निलसागरको आग्रहमा डा. बेलबासेले पारिश्रमिक भने लिँदैनन् । उनले भने बमोजिमको अौषधी दिनुपर्ने भए निलसागर आफैले खर्च गर्छ । त्यहाँ हेरचाह गर्ने र खाना पकाउने ३ जना छन् । उनिहरु सबैले मानबिय सेवाका लागि पारिश्रमिक लिँदैनन् ।